IDOZI ỤLỌ AHỊA NA-ATỤGHỊ ANYA YA EWEPU BLUE SCREEN ERROR WINDO 10 - WINDOWS 10
Idozi ụlọ ahịa na-atụghị anya ya ewepu Blue screen Error windo 10
Inweta ụlọ ahịa na-atụghị anya ya BSOD mgbe windo 10 1809 kwalite? Njehie Storelọ Ahịa a na-atụghị anya ya mebiri ọtụtụ ndị ọrụ mgbe emelitere ụdị nke Windows 10 ndị gara aga. Ma ọ bụ mgbe ụfọdụ mgbe wụnye ọhụrụ ngwa ma ọ bụ ngwa na windo 10. Njehie a UNEXPECTED_STORE_EXCEPTION na-egosi na akụrụngwa ụlọ ahịa jidere ihe atụghị anya. E nwere ọtụtụ nwere ike ịkpata a windo 10 BSOD dị ka rụrụ arụ usoro faịlụ, antivirus mmemme, ihe mgbe ochie ngwaike ọkwọ ụgbọala wdg Ihe ọ bụla kpatara ya, ebe a anyị nwere irè ngwọta idozi na-atụghị anya ụlọ ahịa wezụga windows 10 .
Ọdịnaya gosi 1 Ewezuga Storelọ Ahịa na-atụghị Anya Ya na Windows 10 1.1 Lelee mmelite Windows kachasị ọhụrụ 1.2 Mmelite Ngosipụta ọkwọ ụgbọala 1.3 Gbaa System File Checker 1.4 Gbanyụọ Mbido Ọsọ 1.5 Lelee Njehie Disk
Ewezuga Storelọ Ahịa na-atụghị Anya Ya na Windows 10
Nke mbụ, anyị na-akwado wepu ngwaọrụ mpụga niile, wee bido windo niile. Nke a ga - edozi nsogbu ma ọ bụrụ na nsogbu ọhụụ na - ebute nsogbu ahụ.
gbanyụọ windo 10 mmelite ụlọ
Mara: Ọ bụrụ na ụlọ ahịa na-atụghị anya ya na BSOD na-apụtakarị na n'ihi windo a, ọ naghị amalitekarị. Anyị na-akwado buut n'ime ọnọdụ nchekwa nke na-amalite windo na gburugburu ebe nyocha ma na-enye ohere ịme usoro nchọpụta nsogbu n'okpuru. Ma ọ bụghị ya, ịnwere ike itinye usoro ndị dị n'okpuru aka ozugbo.
Lelee mmelite Windows kachasị ọhụrụ
Microsoft na-ewepụta mmelite na-agakọ mgbe niile na ndozi ahụhụ dị iche iche. Mgbe ọ bụla ị chere nsogbu na Windows 10 ihu, anyị na-akwado ịlele maka mmelite ma wụnye mmelite windo kachasị ọhụrụ nke nwere ike ịnwe ahụhụ ahụhụ maka nsogbu a.
Pịa Windows + M iji mepee ntọala,
Pịa mmelite & nche karịa Windows melite,
Ugbu a pịa pịa maka mmelite bọtịnụ
Kwe ka windo nyochaa ma wụnye mmelite kachasị ọhụrụ na ngwaọrụ gị (ọ bụrụ na ọ dị)
Malitegharịa ekwentị windo mgbe mezue usoro.
Ọzọkwa, anyị na-akwado nwa oge iwepu antivirus software na Okwey ọ bụrụ na ahazi.
Mmelite Ngosipụta ọkwọ ụgbọala
Display ọkwọ ekwekọ na-akacha eme ka Windows 10 na-acha anụnụ anụnụ na njehie na-agụnye UNEXPECTED_STORE_EXCEPTION . Anyị na-akwado ịlele ma melite ndị ọkwọ ụgbọala awụnyere.
Maka omume kachasị mma gaa na weebụsaịtị ndị nrụpụta gị dịka NVIDIA, AMD ma ọ bụ Intel. Gaa na ngalaba akpọrọ Ọkwọ ụgbọala. Si ebe ahụ budata nkọwa ọhụrụ. Mgbe ebudatara nbudata ahụ, wụnye ọkwọ ụgbọala ma regharịa kọmputa gị
Reinstall ngosi ọkwọ ụgbọala
N'aka nke ọzọ, ịnwere ike ịwụnye ọkwọ ụgbọala ngosi na-eso usoro ndị a.
Pịa Windows + X họrọ njikwa faili,
Mgbe ahụ emefu ngosi ngosi, nri-pịa arụnyere ọkwọ ụgbọala na họrọ iwepụ.
Pịa ee mgbe ị rịọrọ maka nkwenye ma malitegharịa windo.
Na mbido windo na-akpaghị aka ịwụnye ihe ngosi ọkwọ ụgbọ ala ma ọ bụ wụnye ọkwọ ụgbọala kachasị ọhụrụ ị nwere nbudata na weebụsaịtị ndị nrụpụta.
N'aka nke ọzọ, pịa merie m ka m mepee Ntọala wee pịa Mmelite na Nche. Ozugbo ebe a, pịa Lelee maka mmelite. Windows kwesịrị ịchọta ọkwọ ụgbọala kachasị ọhụrụ ma melite sistemụ gị.
Gbaa System File Checker
Emebi-efu usoro faịlụ nwekwara ike ime ka a na-atụghị anya ụlọ ahịa wezụga njehie. Gbaa usoro ihe nlele faịlụ nke na-enyocha sistemu gị ma nwee ya na-anwale ịrụzi faịlụ ọ bụla nwere nsogbu.
Chọọ maka iwu ozugbo, pịa aka nri ma họrọ ọsọ dị ka onye nchịkwa.
Commanddị iwu sfc / scannow ma pịa igodo ntinye.
Nke a ga - ebute nyocha ma ọ bụrụ na achọpụtara nrụrụ aka ọ bụla na sistemụ faịlụ ndị ọrụ SFC na - akpaghị aka weghachite ha.
Only na-echere 100% mezue scanning usoro
Malitegharịa ekwentị windo mgbe mezue usoro
Ọ bụrụ na ị nweta windo akụ nchedo hụrụ rụrụ arụ faịlụ ma enweghị ike idozi ụfọdụ n'ime ha mgbe ahụ na-agbalị na-esonụ iwu dism / online / nhicha-oyiyi / iweghachite.
Gbanyụọ Mbido Ọsọ
Mbido ngwa ngwa bụ njirimara nke enyere na ndabara na sistemụ Windows 10 dị ugbu a. Site na nke a, kọmpụta gị na-eji ụdị ezumike iji nye gị ọsọ ọsọ ọsọ, ọkachasị na draịvụ diski. Ọ bụ ezie na ọ dị ukwuu, ọ nwere ike ime ka ụfọdụ ndị ọkwọ ụgbọala ghara ibudata nke ọma, nke nwere ike ibute njehie ụlọ ahịa na-atụghị anya ya. Dịka, ọ bara uru ịkwụsị ngwa ngwa iji hụ ma ọ ga-ewepụ njehie ahụ.
Mepee nchịkwa nchịkwa
Chọọ ma họrọ nhọrọ ike,
Wee Họrọ ihe bọtịnụ ike na-eme site na aka ekpe.
Ozugbo ebe a, pịa Gbanwee ntọala ndị na-adịghịzi adị.
Untick Gbanwee mmalite ngwa ngwa (akwadoro) wee pịa Chekwa mgbanwe.
Lelee Njehie Disk
Ọzọ ekwe omume-anọchi anya njehie a bụ disk ure nke na-akpata nsogbu na mmalite. Nwere ike ịgba ọsọ chkdsk C: / f / r iwu (anya isi Windows arụnyere na C :) iji dozie nrụrụ diski a.
windo 10 agaghị eburu ihuenyo nnabata gara aga
Ntọala ntọala 11 ịkwesịrị ịkwado Windows 10 Laptọọpụ / PC echedoro
Idozi ihe ngosi ọkwọ ụgbọala kwụsịrị ịzaghachi ma weghachite windo 10
Ihuenyo kọmputa na-ekwu na ntinye anaghị akwado? Lee 3 Na-arụ ọrụ ihe ngwọta
Idozi usoro weghachi emezughị nke ọma na Windows 10
ikpeazụ USB ngwaọrụ bụghị ghọtara windo 10
ọkwọ ụgbọala irq bụghị obere hà
ịhazi nhazi maka windo 10 rapaara na 99
enweghị ụda si google chrome
Njehie 691 vpn windo 8
chkdsk na eme ihe offline offline ma mezie